Amathuluzi Wokuphatha neHashtag Nokuphatha - Uhlu Oluphelele #Hashtag
Ucwaningo lweHashtag, Ukuhlaziya, Ukuqapha, kanye Namathuluzi Wokuphatha
NgoLwesine, Januwari 28, 2021 NgoLwesine, Januwari 28, 2021 Douglas Karr
IHashtag kwakuyi izwi lonyaka ngasikhathi sinye ingane egama linguHashtag, futhi leli gama lavalwa eFrance (mot-dièse).
AmaHashtag aqhubeka nokuba nezinzuzo ezinkulu lapho esetshenziswa ngokufanele emithonjeni yezokuxhumana - ikakhulukazi njengoba ukusetshenziswa kwawo kuye kwanda ngaphezu kwe-Twitter kanye naku-Facebook. Uma ungathanda ezinye izisekelo ze-hashtag, bona i- Umhlahlandlela weHashtag esishicilele. Ungafunda nokuthunyelwe kwethu ku- ukuthola ama-hashtag amahle kakhulu ngokuvuselelwa ngakunye komphakathi.
Ngubani owasungula i-Hashtag?
Wake wazibuza ukuthi ngubani osebenzise i-hashtag yokuqala? Ungabonga uChris Messina ngo-2007 ku-Twitter!
uzizwa kanjani ngokusebenzisa # (iphawundi) yamaqembu. Njengakwi #ukulele [umlayezo]?
- UChris Messina (@chrismessina) August 23, 2007
Njengoba nje igama elingukhiye libalulekile ekutholeni imininingwane online, ama-hashtag nawo ayadingeka. Sibhalile mayelana yini i-hashtag esikhathini esedlule. Abantu namabhizinisi basebenzisa ama-hashtag ukuze batholakale, kodwa futhi basebenzisa ama-hashtag ukuthola abanye basebenzisa ubuchwepheshe bokusesha komphakathi.
Izici ze-Hashtag Platform:
Ucwaningo lweHashtag, amathuluzi wokuhlaziya, wokuqapha kanye nokuphatha anezici eziningi:
I-Hashtag Ethrendayo - ikhono lokuphatha nokuqapha ukuthambekela kuma-hashtag.
Izaziso zeHashtag - ikhono lokwaziswa, cishe ngesikhathi sangempela, ukushiwo nge-hashtag.
Ucwaningo lweHashtag - ukusetshenziswa okulinganisiwe kwama-hashtag nokhiye abathonya abakhulumayo.
Ukusesha kwe-Hashtag - ukukhomba ama-hashtag nama-hashtag ahlobene okusetshenziswa ekuxhumaneni kwakho nabezindaba zenhlalo.
Izindonga zeHashtag - Setha isibonisi se-real-time, curated hashtag somcimbi wakho noma ingqungquthela.
Amanye ala mapulatifomu amahhala futhi anamandla alinganiselwe, amanye akhelwe ukusetshenziswa kwamabhizinisi ukushayela imizamo yakho yokumaketha imidiya yezokuxhumana. Futhi, akuwona wonke amathuluzi aqapha yonke inkundla yezokuxhumana ngesikhathi sangempela… ngakho-ke kuzodingeka wenze ucwaningo ngaphambi kokwenza imali kuthuluzi elifana naleli ukuqinisekisa ukuthi uthola okudingayo!
I-Agorapulse - Ngaphandle kwesethi ephelele yamathuluzi wezokuxhumana, i-Agorapulse nayo ine-hashtag yokuqapha nokubika.
Zonke i-Hashtag - Yonke i-Hashtag iyiwebhusayithi, ezokusiza ukuthi wakhe futhi uhlaziye ama-hashtag afanele futhi asheshayo aphezulu aqukethwe kokuqukethwe kwezokuxhumana kanye nokumaketha. Ungakhipha izinkulungwane zama-hashtag afanelekayo omane ukopishe futhi unamathisele kokuthunyelwe kwakho kwemidiya yokuxhumana nabantu.
I-Brand24 - Thola ukufinyelela okusheshayo ekubalweni online, khulisa ukwaneliseka kwamakhasimende nokuthengisa.
I-BrandMentions Hashtag Tracker - Amathuluzi Wokulandelela weHashtag Wamahhala Wokuqapha Ukusebenza KweHashtag.
BuzzSumo - I-BuzzSumo iqaphe izimbangi zakho, ukubalulwa komkhiqizo nezibuyekezo zomkhakha. Izexwayiso ziqinisekisa ukuthi ubamba imicimbi ebalulekile futhi awushayeki ngaphansi kwe-avalanche yezokuxhumana.
I-HashAtIt.com iyinjini yokusesha esesha i-HASHTAGS (#) kumawebhusayithi wakho wezokuxhumana owathandayo njenge-Facebook, Twitter, Instagram, ne-Pinterest.
Ukukhishwa kwamahhashi - Okuqukethwe kwe-Curate, khulisa umphakathi, dala imikhankaso yokuwina imiklomelo nemiboniso yezindaba yezenhlalo ebukhoma.
I-Hashtagify.me iyithuluzi lamahhala lokuhlola ama-hashtag we-Twitter nobudlelwano bawo. Ukuhlaziywa kususelwa kusampula le-1% lawo wonke ama-tweets - inani eliphakeme elinikezwa yi-Twitter mahhala.
I-Hashtags.org inikeza imininingwane ebalulekile, ucwaningo nolwazi lokuthi lusiza kanjani abantu ngabanye, amabhizinisi nezinhlangano emhlabeni wonke ukuthi bathuthukise uphawu lwabo lwezokuxhumana kanye nobuhlakani.
Ukhiye - Landelela ama-hashtag, amagama angukhiye, nama-URL ngesikhathi sangempela. Ideshibhodi ye-hashtag analytics kaKeyhole ibanzi, yinhle, futhi iyabiwa!
Hlola i-Keyhole Out:
RiteTag yenza lula inqubo yokuthola amathegi amahle kakhulu wokuhambisana nokuqukethwe okuzokwabiwa, kwamukele izingqinamba zokumaka eziyingqayizivele zamanethiwekhi amaningi abelana ngokuqukethwe, kufaka phakathi i-Twitter, i-Youtube, i-Instagram, iFlickr… nokunye okuningi.
I-Tagdef - Thola ukuthi ama-hashtag asho ukuthini, thola ama-hashtag ahlobene bese ufaka izincazelo zakho ngemizuzwana.
TrackMyHashtag - ithuluzi lokuhlaziya imithombo yezokuxhumana elandelela yonke imisebenzi eyenzeka ngomkhankaso we-Twitter, lihlaziya leyo misebenzi, futhi linikeze imininingwane eminingi ewusizo. I-TrackMyHashtag inamandla okulandelela imikhankaso ephelele yezokuxhumana ukukunikeza yonke imininingwane yeminithi yesihloko. Iletha imininingwane eminingi ewusizo engasetshenziselwa ukuhlaziya umthelela wanoma yimuphi umkhankaso wezokuxhumana, ukulandelela wonke umsebenzi wecebo lemincintiswano yezokuxhumana, noma ukwenza isu lakho lokumaketha imidiya yokuxhumana. I-TrackMyHashtag ilandelela ama-tweets nemethadatha ehlobene nanoma yiliphi igama elingukhiye, i-hashtag, noma i- @mention, kokubili ngesikhathi sangempela nangokomlando nganoma yisiphi isikhathi.
I-UnionMetrics I-Union Metrics ikunikeza amandla ngokukhangisa kwezenhlalo okudingayo ukufinyelela izithameli zakho nokwakha ibhizinisi lakho.
Qalisa Umbiko wamahhala we-Twitter
Ukusesha kwe-Twitter - abantu abaningi babheka ukusesha kwe-Twitter ukuthola ama-tweets wakamuva esihlokweni, kepha futhi ungayisebenzisa ukuthola ama-akhawunti we-Twitter ongawalandela. Ungachofoza Abantu futhi ukhombe ama-akhawunti aphezulu we-hashtag oyisebenzisayo. Inganikezela futhi ngenhloso okufanele kusetshenzelwe kuyo uma izimbangi zakho zikhonjwa nge-hashtag kepha wena ungekho.
Ama-Twub isayithi lapho ungasesha khona, ubhalise futhi ufake uphawu lwe-hashtag ethile. Futhi banamathuluzi afana nezindonga ze-tweet ezilinganiselwe ongazisebenzisela umcimbi wakho olandelayo noma ingqungquthela.
I-Trendsmap - Uqala ngombono wesifunda sakho lapho ungabona khona izihloko ezihamba phambili. Ungapheqa amamephu ngokuwahudulela kwenye indawo noma usondeze noma uphume phakathi usebenzisa izithonjana zokuhlanganisa / zokususa. Lapho ubona okuthile okubukeka kuthakazelisa chofoza kuleso sihloko ukuthola eminye imininingwane njengamagrafu wevolumu yama-tweets endaweni yangakini uma kuqhathaniswa nomhlaba wonke, ukuthi yini isihloko cishe, izithombe, izixhumanisi, kanye nama-tweets akamuva kakhulu. Ungabona futhi lapho lesi sihloko sithandwa khona ngokuchofoza kusihloko ngaphakathi kwesibonisi semininingwane, noma yini enye abantu abathumela ngayo i-tweet kule ndawo ngokuchofoza egameni lendawo.
I-Geochirp - I-GeoChirp ikusiza ukuthi useshele abantu i-Twittering ngezinto ezithile endaweni ethile.
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulo mbhalo.
Tags: brand24chris Messinayenza kahle imibikofacebook hashtagthola ama-hashtagi-hashtag yokuqalai-geochipucwaningo lwe-googlegoogle + hashtaghashatitizinhlelo zokusebenza ze-hashtagukugcinwa kwama-hashtagukuqapha i-hashtagucwaningo lwe-hashtaginjini yokusesha ye-hashtagamathuluzi we-hashtaghashtagify.meama-hashtagI-hashtag ye-pinterestinkambisoumugqaisondlokumane kulinganisweukuphathwa kwabantuithegiumabhebhanaizitayelatweetreachTwitteri-hashtag ye-twitterucwaningo lwe-twitterukusesha kwe-twitterizigaxa
Izindlela Zamuva Zobuchwepheshe Ekuthengiseni
Jan 30, 2013 ku-5: 56 AM
Masithathe i-Facebook, njengesibonelo. Ibhokisi lamazwana alo liyisici esihle sokuthi lisetshenziswe njengenani elikhokhela amakhasimende. Ngakolunye uhlangothi, ama-hashtag e-Twitter ahlinzeka ngohlelo lokumaka oluyingqayizivele lwezingxoxo.
Jun 13, 2013 ku-12: 32 PM
Ngiyabonga ngokufaka iTagboard - ngishaqekile, ukuthi ngithole nje lokhu okuthunyelwe! Sisaqhubeka nokuqina futhi sisebenzise inqwaba yezici selokhu lokhu kuthunyelwe kufaka phakathi ukulinganisela, imodi ebukhoma, njll. Isimemezelo se-Facebook sayizolo besimangalisa kithina! Yize besilokhu sidonsa ama-hashtags kusuka kungxenyekazi yabo kusukela ngo-Okthoba, lesi simemezelo sikhuthaze ukusetshenziswa kwama # hashtag ku-FB & besikubona ukutholwa okumangazayo nokuqukethwe okuningi kusetshenziswa i- # hashtag emahoreni ayi-12 adlule.
UJun 22, 2013 ngo-2: 43 AM
Uhlu olukhulu! Siyabonga ngokuthumela lokhu 😉
Okthoba 24, 2013 ngo-3: 01 AM
Ngiyabonga kakhulu ngokufaka iRiteTag, iDouglas, futhi uma sikwazi ikholi yevidiyo ye-G +, ngithanda ukwenza izinhlelo zethu nguwe; sihlose ukuhambisa ukuze sibe i-hashtag yemiphumela yokulinganisa imiphumela.
Inkampani enhle kakhulu ye-Orlando SEO
Nov 14, 2013 ngo-6: 47 AM
Lezi izindaba ezimnandi “Landelela imvamisa i-hashtag esetshenziswa ngayo ku-Twitter futhi inikeze imininingwane nge-hashtag.” okuthunyelwe okuhle…
CEO / Umsunguli / Bamba Umbukiso Wenethiwekhi Yomphakathi
Okthoba 18, 2014 ngo-8: 55 AM
kuyakhanga futhi kuyasiza, ngiyabonga.
Dec 17, 2015 ku-9: 21 AM
Ngiyithanda kakhulu ibhulogi yakho - Ngenye yezinto ezimbalwa engizilandelayo ngokwenkolo kepha kunento eyodwa engingayiqondi, ngoba akekho noyedwa owake wakhuluma ngalokhu - hhayi wena, hhayi iBuffer.
1. Kukuthola ubhalwe ohlwini (ngenxa yokuzenzakalela okubucayi ikakhulukazi ku-IFTTT nakule ndlela “yokungibona”) -
2. Kukuthola ukubandakanyeka ngokwengeziwe kepha KUPHELA ngenxa yama-bots nokubhala okuzenzakalelayo.
Ukuhlola le mbono, ngakha i-bot engenzanga lutho ngaphandle kokubhala kabusha uJeff Bullas izinyanga ezi-2 (ngoba ababhali bakaJeff basebenzisa ama-hashtag amaningi kunanoma ngubani engimaziyo) futhi i-bot yami ibhalwe ngaphezu kwezikhathi eziyi-1000 KANYE inegunya eliphezulu kwezenhlalo kunami ngokusho kukaFollowerwonk! Akalandeli noma ngubani akenzi lutho ngaphandle kwe-RT Jeff Bullas ne- # growthhacking. Ungazihluphi ngokwakha uhlu nge #socialmedia noma #emailmarketing - uzothola udoti
Angifuni ukufakwa kuhlu ngenxa ye- # SSA noma ngithole ukuzibandakanya okuningi kwe-bot. Ngakho-ke i-IMHO, ama-hashtag awafaki inani langempela (ngaphandle kwezingxoxo ze-Twitter nezinkomfa njll). Ngibhale okuthunyelwe ngalokhu ku-Medium.
I-Ritetag yinhle kepha hhayi ngoba ikunikeza ama-hashtag angcono (empeleni, ama-hashtag awo awakutholi ukufakwa ohlwini). I-Ritetag yinhle ngoba ikuvumela ukuthi ungeze izithombe, ama-meme nama-gif kuma-tweets akho ngaphandle kwamandla.
Dec 17, 2015 ngo-2: 14 PM
UDebbie - leso yiseluleko esihle kakhulu kubafundi bethu. Futhi uqinisile - njengoba sisebenzisa iRitetag, ikhono lokungeza izithombe lihle kakhulu. Ngiwumlutha wezipho ezigqwayizayo!
Dec 17, 2015 ngo-3: 34 PM
Sinezinto ezingaphezu kweyodwa esifana ngazo! Nami ngiyisigqila sezipho. 🙂
Mar 11, 2016 ku-4: 15 PM
Izeluleko ezinhle zokuthi uzulazula kanjani kule migodi.
Sep 6, 2016 ku-9: 48 AM
Alukho ucwaningo lwegama elingukhiye oluphelele ngaphandle kweziphakamiso zosesho, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngosesho lweselula, lapho abantu bavame ukuzisebenzisa ukonga isikhathi. Anginazo izinombolo kepha ngiyakhumbula ukuthi abasebenzisi beselula bacofa kaningi kakhulu kuziphakamiso zokusesha futhi lezo ziphakamiso zehluke kakhulu emibuzweni yakho ejwayelekile. Isibonelo: https://serpstat.com/keywords/questions/?query=bluetooth+speaker&se=g_us
Sep 15, 2016 ku-2: 08 AM
I-athikili ethakazelisa kakhulu! Ngikuthole kusiza kakhulu kulabo abasemkhakheni we-SEO kanye ne-Social Media Marketing.
Ngiyabonga kakhulu ngalokhu. Ngibheke phambili kokuningi kwendatshana yakho mnumzane!
Jan 27, 2021 ku-3: 28 AM
Umsebenzi omuhle! Ngiwafundile wonke amathuluzi okukhuluma. Qhubeka nomsebenzi omuhle!
Siyabonga ngokwabelana ngalolu lwazi oluwusizo. Njengoba ukhuluma ngamathuluzi we-hashtag analytics, kunelinye ithuluzi lamahhala engingathanda ukukutshela lona.
Igama layo https://www.trackmyhashtag.com/ - ithuluzi le-hashtag analytics. Kuhle kakhulu ukulanda noma yiluphi uhlobo lwedatha yama-hashtag ngesikhathi sangempela kusuka ku-Twitter bese uyihlaziya ukuze ukhiqize izibalo eziwusizo.
Ngingajabula uma ubheka leli thuluzi bese unikeza impendulo yakho ebalulekile.
Jan 31, 2021 ngo-1: 19 PM
Ngingeze ithuluzi futhi ngabuyekeza le ndatshana, ngiyabonga!
Feb 23, 2021 ngo-2: 57 AM
Siyabonga ngokufaka i-Trackmyhashtag. Ngijabule kakhulu ukubona 🙂